Iindaba-Isizinda seseShenzhen Wonderfulgold Clothing Co., Ltd.
Namhlanje abantu bathanda ukunxiba iimpahla ezintsha.Zininzi iimilo ezinxitywayo ngokukhethekileyo kumanenekazi, ekunokucaciswa kuwo i-silhouette yawo.Izithuko zezona mpahla zibalaseleyo, ezifunwayo kumanenekazi/abasetyhini.Ke ngoko, uhlobo, ipateni, isitayile kufuneka ziqwalaselwe ngokuhambelanayo.Iindleko yicrux engenakuphikiswa yokuba abantu bacingelwe.Abantu bafuna ukuthenga ijezi ekumgangatho olungileyo wengoma.Abafuni ukusetyenziswa ngokungekho ngqiqweni, mhlawumbi baya kuba ne-spree yokuthenga, kodwa kungekhona ukuthenga ngokungxama.
Jonga iwebhusayithi ethi www.sweater365.com yeejezi zakho ezinithiweyo ngamaxesha onyaka.Ukusuka kwisizinda, ungafumana igama elithi "sweater" kunye nenombolo "365".
Ke yintoni ijezi?Ewe, masifunde kwiWikipedia.
Ijezi okanye i-pullover, ekwabizwa ngokuba yi-jumper kwisiNgesi saseBritane naseOstreliya, sisiqwenga sempahla, enemikhono emide, eyenziwe ngezinto ezinithiweyo okanye ezikroliweyo, ezigquma indawo ephezulu yomzimba.Xa ingenamikhono, ingubo idla ngokubizwa ngokuba yi-slipover okanye i-sweater vest.
Ii sweatshi zinxitywa ngabantu abadala nabantwana bazo zonke iindidi zesini, ngokufuthi phezu kwehempe, iblawuzi, iT-shirt, okanye enye itop, kodwa maxa wambi ecaleni kwesikhumba.Iisweyi zazisenziwa ngokwemveli ngoboya kodwa ngoku zingenziwa ngomqhaphu, iintsinga zokwenziwa, okanye nayiphi na indibaniselwano yezi.Kukho neejezi zonyaka, ezijikeleze iKrisimesi zibizwa ngokuba "ziijezi ezimbi".
Kuthekani ngo "365"?
Ikhalenda kaGregory, okanye ikhalenda yale mihla, iveza unyaka wayo wokuba ngunyaka oqhelekileyo oneentsuku ezingama-365 okanye unyaka omninzi weentsuku ezingama-366.
Unyaka wonke, iintsuku ezingama-365 okanye iintsuku ezingama-366 kunyaka omnqantsa, iimpahla kufuneka zinxitywe.Kulula kuwe ukukhumbula iwebhusayithi yethu "sweater365".Ngokucacileyo, kukho iipateni ezininzi zeejezi ongenakufumana kwiwebhusayithi yethu, akunamsebenzi, sixelele into oyifunayo kwaye usinike umfanekiso, umyili wethu uya kuhlangabezana nemfuno yakho ngokwanelisayo.
Wamkelekile ukukhangela iwebhusayithi yethuwww.sweater365.com;welcom ukutyelela inkampani yethu okanye umzi-mveliso-iShenzhen Wonderfulgold Clothing Co., Ltd.